नेपाली फिल्मको उमेर ५० वर्ष भयो। यत्रो समय खाइसकेको फिल्मले फुल्न र फल्न भने जानेन। वर्षमा सय वटासम्म फिल्म बन्छन् तर चारपाँच वटाले पनि लगानी उठाउन सक्दैनन्। पुरानादेखि नयाँसम्म सबै...
भाउजूको दोस्रो पति देवर हो?
पाठक महानुभावहरू! आज म देवर र भाउजूको सम्बन्ध केलाउँदै छु। यति बेला मैले बाध्य भएर रामायणको कथा सम्झाउनुपर्ने भएको छ। बालि र सुग्रीव दाजुभाइ हुन्। राजा हुन् कि भगवान्का मीत...